ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သုံးပြီး၏ကုန်ကျစရိတ်မကြာခဏဦးတည်ရာနှင့်လေယာဉ်၏ကြာချိန်ပေါ်မူတည်. စျေးနှုန်းများအုပ်စုတစ်ခုရှိလူများနှင့်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်သူတို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုအထူးတောင်းဆိုမှုများ၏နံပါတ်ပေါ် မူတည်. လည်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ အလင်းသည်ဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် Size ကိုပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ အကြီးစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ တာဘိုပရော့ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
Dassault စွန်ငှက် 900EX လွယ်ကူ ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းကုန်ကျစရိတ်
သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်အပန်းဖြေများစွာသောလူတစ်ဦးပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းနှင့်အတူပျံအကြောင်းကိုသတင်းပို့ကိုအကောင်းဆုံးအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်. သူတို့ကလေယာဉ်န်းကျင်ရွှေ့ဖို့ပိုပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့ကြုံခံစား, ဝန်ဆောင်မှုပိုကောင်းတဲ့အဆင့်အထိ, တစ်ဦးထက်ပိုသောငြိမ်းချမ်းသော In-ပျံသန်းလေထု.
တစ်ဦးချင်းစီဂျက်ပိုင်ရှင်တွေအပြင်,anumber of companies specialize in renting Dassault Falcon private jets in various sizes and categories. Categories of charter jets include VIP airliners, mid-size planes, lightweight jets, and long range travel jets.
Flight attendants haveagreat deal of experience and are able to provide excellent service to all private jet travelers. ပုံမှန်အားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းရေရှည်ဘွတ်ကင်အဖြစ်အများအပြားစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုမလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်မဆိုလိုအပ်နောက်ဆုံးမိနစ်အပြောင်းအလဲများအောင်အရှိဆုံးစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူကဲ့သို့တူညီသောဆက်ပြောသည်ကုန်ကျစရိတ်သယ်ဆောင်မထားဘူး.
ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများအများဆုံးအဓိကမြို့ကြီးများတွင်ထူထောင်နေကြ, with more of them moving to mid-sized cities around the country. More travelers and private jet owners alike are discovering the benefits of charter jet rental.
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို WysLuxury JetCharter (@wysluxury) အပေါ် ဒီဇင်ဘာ 7, 2016 တွင် 5:38နံနက် PST